EyeChiefs idala uqhekeko kwiPSL - Ilanga News
Home Ezemidlalo EyeChiefs idala uqhekeko kwiPSL
Kubuya isikhulu esihlonishwayo ebholeni lakuleli
KUFUFUSA uqhekeko kwi-Premier Soccer League (PSL) njengoba kunabaphathi bamakilabhu abayibona yenzelela bukhoma kwiKaizer Chiefs efake isicelo sokuhlehliswa kwayo yonke imidlalo eyisalele kule sizini ikhala ngokuhaqwa yiCoronavirus kwezisebenzi zayo ezingaphezulu kuka-30 okukhona kuzona nabadlali. Izikhulu zamakilabhu adlala kwiPSL ezikhulume neLANGA ngombandela wokungadalulwa, zithi ziyaxakeka ukuthi kungani le nhlangano ingaphumeli obala, ichithe iChiefs ngoba imithetho icacile ukuthi kayikho ikilabhu evumeleke ukuhlehlisa umdlalo.
IChiefs ikhiphe isitatimende ngoLwesibili ntambama ilibeka ngesihloko elokuthi ngeke ilubhade emdlalweni neLamontville Golden Arrows obekufanele ugijinywe izolo ngoLwesithathu KwaMashu, izeseka ngokuthi isibalo sabahaqekile sesenyukele ku 36, sisuka ku-31. Ithe izibophezele ekulwisaneni nokusabalala kweCorona nokuvikela impilo yezakhamizi zakuleli kulo mkhuhlane. USihlalo wePSL u-Irvin “Iron Duke” Khoza ucashunwe ethi usaxhumana nabammeli abehlukene ngalolu daba.
Omunye wabaphathi bamakilabhu ePSL ozwakalise ukuthi iya-mcika indlela iPSL esingethe ngayo lolu daba, uthe: “UKaizer Motaung (onguSihlalo weChiefs) ubehlale ekugcizelela ukuthi amakilabhu kumele adlale uma (lawo makilabhu) ezikhalela eligini ngokuthi anabadlali abahaqwe yileli gciwane. Manje yini ke esinzima ekutheni nekilabhu yakhe yenze lokhu abehlale efuna kwenziwe ngabanye? “Kunamakilabhu amaningi ahlu-leke ancama ukuhlehlisa imidlalo ecindezelwa yiPSL ngemithetho yayo. Sekunzima manje uma seku-yiChiefs? Okokuqala nje iChiefs kayicacisi ukuthi bangaki abadlali bayo abahaqekile.
“Kodwake kuba njena uma izinto zenziwa ngobungani. Le nto izodala olukhulu uqhekeko kwi-PSL. Yingakho nje ibhala icisha.” Esinye sivele sawagagula ngamagama amakilabhu esahlatshwa sahlikizwa isicelo sawo sokuhlehlisa imidlalo ngenxa yalolu khuvethe. “ISekhukhune United neRoyal AM balwazi kahle usizi lokwenqatshelwa ukuhlehliselwa imidlalo kanjalo neCape Umoya eseyadayi-swa.
“Imithetho yeFifa ikucacisa kahle ukuthi abadlali abawu-7 bangadlala. Njengoba iChiefs ingayi nje emidlalweni, kumele iphucwe amaphuzu anikwe amakilabhu eqhathwe nawo,” kusho lesi sikhulu. Esinye sigxeke iPSL ngokuvumela iCape Town City ukuya eGoli ngeledlule neChiefs ekubeni iziMpofana zazivele sezishilo ukuthi ngeke ziye enkundleni. ICity yajika enkundleni ifikamasango evaliwe.
Kwenzeka lokhu nje, iPSL ishiywa yizikhulu ezimqoka njengoba kusanda kwesula uNande Becker obengumshushisi kanti uMichael Murphy obeyiCompliance Officer uselaxaze umsebenzi kanjalo no-Yusuf Yessaf obeyiFinancial Officer. Kuvele izindaba zokuthi uZola Majavu uzoshaya ibuya inyanga eyodwa kwiPSL emuva kokuba ebongelwe ngumphathi weSwallows FC, uDavid Mogashoa onguSihlalo wayo kwiTwitter yakhe. UMajavu uyahlonishwa ngolwazi olunzulu lwebhola kanti wake waba yiCEO yale nhlangano.
Previous articleKHETHA I-BMW X3 NOMA X4, ZIKHETHE WENA UQOBO
Next articleKusolwa umbango wesoseji kogwazwe wabulawa ‘yintombi’